Iwu Nweta Weebụ | Ota Ward Cultural Promotion Association
Nweta nnweta web
Ebe nrụọrụ weebụ nke Ota Ward Cultural Promotion Association kwesịrị ịdị maka onye ọ bụla, gụnyere ndị agadi na ndị nwere nkwarụ., Software na Ọrụ-Nkebi nke 8341: Ọdịnaya Weebụ, na ebumnuche nke ịgbaso ọkwa "AA".
* Ihe edere "nrube isi" na iwu a dabere na ọkwa akọwapụtara na Kọmitii Na-ahụ Maka Inweta Nhazi Web Web Information Access Information and Communication "JIS X 8341-3: Ntuziaka Ntuziaka Nkwado Ntuziaka 2016 maka Ntanetị Weebụ-Mkpokọta 2016 Edition".
Ota Ward Omenala Nkwalite Omenala
Ikwado nkwuputa ebumnuche na nzaghachi
Ekwekọ na JIS X 8341-3: 2016 Ọkwa AA
Criteriaga nke ọma ịgbakwunye
Ihe ndị AAA ndị na-esonụ
JIS X 8341-3 2.2.3 Nhazi ihe ịga nke ọma na-enweghị oge
JIS X 8341-3 2.3.2 criteriakpụrụ na-aga nke ọma maka ọkụ 3
JIS X 8341-3 2.4.8 Successga nke Ọma maka ọnọdụ dị ugbu a
PDF (Mpempe Akwụkwọ Akwụkwọ Obere)
Okwu (Okwu (Microsoft Word))
Ọrụ enyere site na mpụga yana eso ọdịnaya ma ọ bụ ibe weebụ, onyonyo, vidiyo, wdg.
* Ihe Nlereanya nke 3.
Ọrụ ndị google nyere (google google search, youtube videos, google map, Google Street View, wdg)
SNS (Twitter, Instagram, akara, wdg)
Multilingual peeji nke site na akpaka translation nyere site subdomains
Criteriakpụrụ ihe ịga nke ọma
Ihe ederede na-abụghị ederede A 〇 〇
Naanị ọdịyo na vidiyo naanị (edere) A - 〇 Ọ nweghị ọdabara ọdịnaya.
Caption (edere) A - 〇 Ọ nweghị ọdabara ọdịnaya.
Nkọwa okwu ma ọ bụ ọdịnaya ọzọ maka mgbasa ozi (edere) A - 〇 Ọ nweghị ọdabara ọdịnaya.
Caption (na-ebi ndụ) AA - 〇 Ọ nweghị ọdabara ọdịnaya.
Nkọwa okwu (edere) AA - 〇 Ọ nweghị ọdabara ọdịnaya.
Ozi na mmekọrịta A 〇 〇
Nzube bara uru A 〇 〇
Atụmatụ mmetụta A 〇 〇
Ojiji nke agba A 〇 〇
Njikwa olu A - 〇 Ọ nweghị ọdabara ọdịnaya.
Iche (opekempe) AA 〇 〇
Gbanwee ederede AA 〇 〇
Ederede ederede AA 〇 〇
kiiboodu A 〇 〇
Enweghị ọnyà keyboard A 〇 〇
Kemeghi oge A - 〇 Ọ nweghị ọdabara ọdịnaya.
Kwusi, kwusi ma zoo A 〇 〇
Oge onwe onye Aaa - 〇 Ọ nweghị ọdabara ọdịnaya.
XNUMX mgbukepụ ma ọ bụ ihe na-erughị ọnụ ụzọ mbata A - 〇 Ọ nweghị ọdabara ọdịnaya.
Ugboro atọ nke ọkụ ọkụ Aaa - 〇 Ọ nweghị ọdabara ọdịnaya.
Gwuo Skip A 〇 〇
aha peeji A 〇 〇
Lekwasị anya n'usoro A 〇 〇
Nzube nke njikọ (na gburugburu) A 〇 〇
Otutu uzo AA 〇 〇
Isi na aha mmado AA 〇 〇
Gbado anya AA 〇 〇
Asụsụ Peeji A 〇 〇
Languagesfọdụ asụsụ AA 〇 〇
Mgbe na-elekwasị anya A 〇 〇
N'oge ntinye A - 〇 Ọ nweghị ọdabara ọdịnaya.
Igodo na-agbanwe agbanwe AA 〇 〇
Iche iche na-agbanwe agbanwe mgbe niile AA 〇 〇
Njehie mata A - 〇 Ọ nweghị ọdabara ọdịnaya.
Label ma ọ bụ nkọwa A - 〇 Ọ nweghị ọdabara ọdịnaya.
Ntụnye mmezi mperi AA - 〇 Ọ nweghị ọdabara ọdịnaya.
Njehie ezighi ezi (iwu, ego na data) AA - 〇 Ọ nweghị ọdabara ọdịnaya.
Ptụgharị A 〇 〇
Aha, ọrụ na uru A 〇 〇
* Ka ọnwa nke atọ nke atọ nke Reiwa
Nọmba ekwentị: 03-3750-1611